ဦး​စောက ဘာ​ကြောင့်​ ဗိုလ်​ချုပ်​ကို သတ်​တာလည်း (သိပ့်​စိတ်​ဝင်​စားဖို့ကောင်းတဲ့ ပို့တစ်​ခုပါ••) - 9style
ယနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဦးကင်းကောင်ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအတွက် ဦးကင်းကောင်ရဲ့ နောက်ဆုံးအလှူ
စာရိတ္တမကောင်းတဲ့အိမ်အကူ မလိုပါဘူး လို့ပြောလာတဲ့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်
ဝက်ဝက်ကွဲအောင်ပွင့် ဇာတ်ကားမှာ မိန်းမလျာပုံစံနဲ့ ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမယ့် ဥက္ကာမင်းမောင်
ဦး​စောက ဘာ​ကြောင့်​ ဗိုလ်​ချုပ်​ကို သတ်​တာလည်း (သိပ့်​စိတ်​ဝင်​စားဖို့ကောင်းတဲ့ ပို့တစ်​ခုပါ••)
March 21, 2018 March 21, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEအထွေထွေဗဟုသုတ
ဦးစောက ဘာကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကို သတ်တာလဲ ဆွေးနွေးခြင်း
ယနေ့တော့ အင်မတန် အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ဆွေးနွေးစကားဝိုင်း တစ်ခုကို ကြုံခဲ့ရသည်။ စကားဝိုင်းတွင် ပါကြ သူ များကတော့ ကျွန်တော်၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းကြီး ဦးတင်ဝင်းနှင့် ကို မင်းညို တို့ဖြစ်သည်။ ဦးစော ဘာလို့ ဗိုလ်ချုပ်ကို သတ်သလဲ ခေါင်းစဉ်ကို ကို မင်းညိုက စသည်မို့ ကိုမင်းညိုအကြောင်း အနည်းတော့ ပြောပြ ပေမည်။ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် ကိုမင်းညိုနှင့် စတင် တွေ့ဆုံစဉ်က သူသည် စောဘွဲ့မှူး၏ မျက်လုံးတစ်ဖက် ကန်းနေခဲ့ပါလျှက် ဘုရင်ကိုဖမ်းပြီး အကျဉ်းချဝံ့သူ ငရမန်ကန်းကြီးအား အရမ်းဂုဏ်ပြုမိတော့ ဆိုသည့် သီချင်း အတိုင်း ငရမန်ကန်းကို သတ္တိရှိသူ အဖြစ် ချီးမွမ်းခဲ့သည်။
ဦးပေါင်းကျားနှင့် မြင်းကျားရှင် ဇာတ်လမ်းတွင် ညကြီး သန်းကောင် ဦးပေါင်းကျားနှင့် မြင်းကျားကြီးကို စီးသော အလောင်းစည်သူမင်းကြီး၏ ငါမအိုသေး ဇာတ်လမ်း အား ဘုရင်မို့လို့ မသိဟန်ဆောင် လွှတ်ပေးလိုက်သည် ဆိုသည့် ဆောင်းပါးကို သူအရမ်းကြိုက်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ချစ်ဦးညို၏ လင်္ကာဒီပချစ်သူ ဝတ္တုကြီးကို သူဘာကြောင့် ကြိုက်ကြောင်းတွေလည်း ပြောတတ် သည်။ ယခု တစ်ကြိမ်တွင်တော့ သူကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးသည့် ဇာတ်ကောင်သည် ဦးစော ဖြစ်ပေတော့သည်။
စာမဖတ်သူသည် စကားဝိုင်းတွင် ကျီးအ ကဲ့သို့ နှုတ်ဆိတ်ရသည်ဆိုသည့် အဖြစ်ကို ကျွန်တော် ကြုံလိုက် ရသည့် နေ့အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်းပါး၊ အတုပတ္တိများစွာ ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးသည်။ ဗိုလ်ချုပ် ဘယ်လောက်တော်ကြောင်း ချီးမွမ်းမည် ဆိုရင်လဲ အာဘောင်အာရင်း သန်သန် ဆွေးနွေးတတ်သည်။ သို့သော် ကိုမင်းညိုမှ ဦးစော ဘာကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကို သတ်သလဲ ဆိုသည့် မေးခွန်းကို ဖြေဖို့တော့ ကျွန်တော် ချက်ချင်း အဖြေမထွက်ခဲ့။ Who really Killed Aung San ဆိုသည့် Documentary ကို ကြည့်ဖို့ ပျင်းသည့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပင် အပြစ်ဆိုရတော့ ပေမည်။
စကားဝိုင်းကို စသူက ကျွန်တော်။ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မို့ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကို အစဖော်၏။ ကိုမင်းညိုကား ပြုံးပြီး နားထောင်၏။ ထို့နောက်တွင်မှ ကဲ..မောင်ရင်.. ဒါဖြင့် ဦးစော က ဘာဖြစ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကို သတ်ရတာလဲ ဆိုတာ သိလား ဆိုသည့် အမေးကို စမေးလေတော့သည်။
ကျွန်တော်။ မကျေနပ်လို့ သတ်တာပေါ့ ကိုမင်းညိုရာ။ ၁၉၄၆ စက်တင်ဘာမှာ ဦးစော ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ပြီး လုပ်ကြံလို့ မျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်ခဲ့တယ်။ ဒါကို ဗိုလ်ချုပ် ခိုင်းတယ် ဆိုပြီး ဦးစော က ညှိုးတယ်လေ။ ဒီအတွက် ပြန်သတ်တာ မဟုတ်လား။
ဦးတင်ဝင်း။ ဗိုလ်ချုပ်ကို သတ်ဖို့ အင်္ဂလိပ်က ထောက်ပံ့တယ်လေ။ အင်းယားကန်ထဲမှာပါ သေနတ်တွေ ဖွက် ထားတာကို တွေ့ခဲ့တာပဲ။ ဒါကိုကြည့်ရင် အင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါင်းပြီး ဦးစောက ဗိုလ်ချုပ်ကို အညှိုးနဲ့ သတ်တာလို့ မှန်းရ မှာပဲလေကွာ။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြေကို ကိုမင်းညို ဘဝင်ကျပုံ မရ။ သူက စကားဆက်သည်။
ကိုမင်းညို။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒါတွေ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးစောအကြောင်း လေ့လာကြည့်တော့ သူဟာ ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ဗျ။ ကျောင်းပညာ ၅ တန်းအောင်ဆိုပေမယ့် ၁၉၂၇ မှာ အောက်တန်းရှေ့နေ စာမေးပွဲ အောင်ခဲ့တယ်။ GCBA မှာ ဝင်ပြီး ဝံသာနု အသင်းဝင် လုပ်ခဲ့တယ်။ နန်းရင်းဝန်လဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်လက်ထက်မှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဆိုတော့ သူဟာ သာမန်တော့ မဟုတ်တန်ဘူး။ သိပ်ပြီးတော့ ရူးမိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်တော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး သူ့ကို ဖမ်းတဲ့ အချိန်မှာတောင် ဝီစကီသောက်ပြီး ဟာသပြောနိုင်သေးတယ်။ အင်မတန်မှ သွေးအေး တဲ့သူ။
ကျွန်တော်။ အဲဒါနဲ့ ဘာဆိုင်လဲဗျာ။
ကိုမင်းညို။ သူ့အကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင် သူနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို အရင်သိအောင် လုပ်ရမှာပေါ့။ ဦးစော က တကယ့်မျိုးချစ် တစ်ယောက်ပဲ။ ဆရာစံ ကို ဖမ်းမိတော့ ဆရာစံဘက်က ရှေ့နေလိုက်တာ ဦးစောပဲ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ မြန်မာပြည်အရေးဆိုပြီး စာအုပ်ထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကို ဝေဖန်လွန်းလို့ မောင်စော ဂဋုန် ဖြစ်ပြီ ဆိုပြီး ဂဋုန်ဦးစော ဖြစ်လာတာ မဟုတ်လား။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒိုမေနီယံ အုပ်ချုပ်ရေးပေးဖို့ အက်တလီနဲ့ တွေ့ပြီး ပြောခဲ့သေးတယ်။ နောက်ပြီး သူက အင်္ဂလိပ် အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လာတာတောင်မှ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ အရေးပါလာခဲ့သေးတယ်လေ။
ကိုမင်းညို။ ကိုယ် စဉ်းစား မိတာပါ။ စပြောရမယ်ဆိုရင် အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်က စပြောရမှာပဲ။ အဲဒီစာချုပ်ကို လက်မှတ်သွားထိုးတော့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာ ဦးစောက ပညာရေးဝန်ကြီး အနေနဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ စာချုပ်မှာ ဦးစောနဲ့ သခင်ဗစိန်က လက်မှတ် မထိုးခဲ့ဘူး။ ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ရင် ဦးစောဟာ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းစဉ် တစ်လျှောက်မှာ အတူပါခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ အတွက် သူလည်း ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်း ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ ရတယ် မဟုတ်လား။
ကျွန်တော်နှင့် ဦးတင်ဝင်း နှစ်ယောက်မှာ ဇဝေဇဝါ ဖြင့် သူ ဘာကို ဆိုလိုချင်မှန်း သိပ်နားမလည်။ တကယ်တမ်း ပြောရမည် ဆိုလျှင် အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်ကို ငယ်တုန်းက သမိုင်းမှာ သင်ဖူးသည်ကလွဲပြီး သေချာ မသိ။ အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်ကြောင့် ပင်လုံ ကျင်းပရသည် ဆိုတာကိုတော့ အကြမ်းဖျင်းသိသည်။ ဦးစောနှင့် ဘယ်လို ဆက်စပ်သည်ကိုတော့ အသေအချာ မသိသည်မို့ သူ့စကား အဆက်ကိုသာ နားထောင် ရတော့သည်။
ကိုမင်းညို။ နောက် တစ်ချက်က ဦးစော ကလည်း နိုင်ငံခြားပြန် ပညာတတ်တစ်ယောက်ပဲ။ အဲဒီခေတ်က ခေါင်း ဆောင်တွေ အားလုံးဟာ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်တွေ ပြင်းထန်ကြတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဦးစောလဲ တစ်ယောက် အပါအဝင်ပေါ့။ သူတို့ စပြီး အဲဒီမှာ ကွဲကြပုံရတယ်။
ကျွန်တော်။ ဘယ်လို ကွဲကြတာလဲဗျ.
ကိုမင်းညို။ ဗိုလ်ချုပ်က တစ်နိုင်ငံလုံး လွတ်လပ်ရေး ရချင်တယ်။ တောင်တန်းပြည်မ အားလုံး အတူရချင်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ ဦးစောက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တွေးချင်လဲ တွေးမှာပေါ့။ ပင်လုံညီလာခံကြီး ကျင်းပတော့ ဗိုလ်ချုပ်က ကတိတွေ ပေးခဲ့တယ်။ ခွဲထွက်ခွင့်တွေ၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေ အများကြီးပဲ။ ဒါတွေကို ဦးစော က ကန့်လန့်တိုက်တာတွေတော့ မကြားဖူးဘူး။ ဆိုလိုတာက ပင်လုံ ညီလာခံအပြီးမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး လွတ်လပ် ရေး ရတာကို ဦးစောလဲ ဗိုလ်ချုပ်တို့နဲ့ အတူ လက်ခံသွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဦးတင်ဝင်း။ ကြိတ်ကြံနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့မှ သူ့အကြောင်း မဖတ်ဖူးတာ။
ကိုမင်းညို။ ကိုတင်ဝင်း ထင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပင်လုံညီလာခံကြီးက သဘောတူတဲ့ အချက် တွေ က တစ်ချို့ မြန်မာ ခေါင်းဆောင်တွေ လက်မခံနိုင်စရာတွေ အများကြီးပါတယ်လေ။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ ဗိုလ် ချုပ်မပါတဲ့ အစည်းအဝေးတစ်ခု ကျင်းပတယ်။ အဲဒီမှာ ပင်လုံက သဘောတူညီချက်တွေ ပြောတော့ ဗိုလ်ချုပ် ပြောတာ၊ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဆိုပြီး ဆက်မဆွေးနွေးလို့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဒေါသထွက်ကြတယ်။ နောက်မှ ဗိုလ်ချုပ်က ခေါ်ပြီး ပြန်ရှင်းရတယ်။ အဲဒီမှာတင် ဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့ ကတိတွေနဲ့ တစ်ခြားသူတွေကြားမှာ အမြင်မကြည်တာ တွေ ရှိလာပြီ မဟုတ်လား။
သူပြောပုံအရဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ထဲပဲ ပင်လုံနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပြောခဲ့သယောင်ယောင်မို့ အချက် အလက်တွေကို ခေါင်းပူအောင် စဉ်းစားပေမယ့် ချက်ချင်း မထွက်တာမို့ အလိုက်သင့်သာ သူ့ကို ဆက်ပြော စေခဲ့သည်။
ကိုမင်းညို။ ပင်လုံညီလာခံလဲ ပြီးပြီ။ ဗမာပြည်လဲ လွတ်လပ်ရေး ရတော့မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့ ကတိတွေ ကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေကလဲ အဲဒီအချိန်မှာ ပြင်ဆင်နေပြီ။
ဦးတင်ဝင်း။ ဘာကို ပြင်ဆင်တာလဲ။ ရှင်းရှင်းပြောပါဗျာ။
ကိုမင်းညို။ လာမှာပေါ့ ကိုတင်းဝင်းရာ။ တိုင်းရင်းသားတွေ လိုချင်တာက ခွဲထွက်ခွင့်လေ။ စော်ဘွားတွေ၊ ပဒေသရာဇ်တွေ မဟုတ်လား။ လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ ကတိတွေ ရပြီးပြီ ဆိုတဲ့နောက် ကိုယ့်အာဏာ ကိုယ်တည် ဆောက်ဖို့ ပြင်ကြပြီပေါ့ဗျာ။
အခုထိတော့ ကျွန်တော်လည်း သဘောမပေါက်သေး။ ကိုမင်းညို ဘာကို ပြောချင်သည့်အတွက် ဒီလောက် စကား ရှည်နေလဲ ဆိုတာလဲတွေး မရသေး။
ကျွန်တော်။ ကဲ..ကိုမင်းညို. ဒဲ့သာပြောဗျာ။ ခင်ဗျားစကား နားထောင်ရတာလဲ တကယ့်အခက်ပဲ။
ကိုမင်းညို။ ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ အချက်ရောက်ပါပြီ။ လွတ်လပ်ရေး ရရင် ပဒေသရာဇ်တွေ စော်ဘွားတွေက ခွဲထွက်ခွင့်တောင်းမယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကလဲ ကတိခံထားတာမို့ ပေးကို ပေးရမယ်။ မပေးဘူး ဆိုရင် အင်္ဂလိပ် လက် ကျန်နဲ့ လွတ်လပ်ပြီးစမှာ စစ်ခင်းရတာတွေ၊ စည်းရုံးရတာတွေနဲ့ တိုင်းပြည် တည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ ဘူး။ ဒီတော့ လုပ်စရာက တစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ်။
ကိုမင်းညို။ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးတဲ့ ခေါင်းစဉ် ပေါ့ဗျာ.
ကိုတင်ဝင်း။ ဟာဗျာ.. မဖြစ်နိုင်တာ။
ကျွန်တော်။ ကိုမင်းညို ပြောပုံအရ ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုကြီး ခွဲထွက်မှာ စိုးလို့ ဦးစော ကပဲ ဗိုလ်ချုပ် တို့ကို အနစ် နာခံပြီး သတ်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်နေပြီ။ မတန်မရာဗျာ။
ကိုမင်းညို။ ဒါလဲ ခင်ဗျားတို့ အတွေးနဲ့ ခင်ဗျားတို့လေဗျာ။ ကျွန်တော် သိတာက ဦးစော ဟာ ပညာတတ်။ တွေး တတ် စဉ်းစားတတ်တယ်။ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်တွေကို လုပ်ကြံပြီး သူလွယ်လွယ် လွတ်ချင်ရင် လေယာဉ် နဲ့ နိုင်ငံကူးမှာပေါ့ဗျာ။ နောက်ပြီး သူ့အမျိုးတွေ အကုန် အပြင်ကို လွှတ်မှာပေါ့။ ဒီထက်ပိုပြီး ကြံစည်ချင်တယ် ဆိုရင် ပိပိရိရိ ကြံလို့တောင် ရသေးတယ်။ ဘုရင်ခေတ်တုန်းကတောင် အိမ်ရှေ့စံကနောင်မင်းသားကိုသတ်ပြီး မြင်ကွန်း၊မြင်းခုံတိုင်တို့ထွက်ပြေးတာ လွတ်သေးတာပဲ။ အင်္ဂလိပ်ခေတ် မလွတ်စရာကို မရှိတာ မဟုတ်လားဗျ။
ဗိုလ်ချုပ် တို့ အသတ်ခံရချိန်တွင် ပြည်သူများက ဦးစောအိမ်ကို ခဲနဲ့ပေါက်၊ စာတွေ ကပ်၊ ဆဲဆိုကြသည်မှာ လည်း ထိန်းမရခဲ့။ ဦးစော မိသားစု များသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရပ်တည် မရခဲ့။ ထိုသို့သော ဝေဒနာ များ ကို ဖြစ်လာမည်ကို သိပါလျှက် ဦးစော ဘာကြောင့် ကျေကျေနပ်နပ် ကြိုးစင်တက်သွားသည် ဆိုသည့် အတွေး ကို ကျွန်တော် တွေးမိလိုက်သည်။ သေချာသည်ကား ကျွန်တော် ကိုမင်းညိုကို တုန့်ပြန်ပြောနိုင်ဖို့ စာဖတ် ရအုံး ပေမည်။
ကျွန်တော်။ ကဲ..ဟုတ်ပါပြီဗျာ။။ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲ။ နောက်အပတ် တွေ့မယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် နည်းနည်း လေ့လာ လိုက်အုံးမယ်။ လုံးဝတော့ လက်မခံနိုင်သေးဘူးဗျို့။
ကိုမင်းညို။ ကောင်းပါပြီကွာ။ လေ့လာ ပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ စာဖတ်လေ ကျွန်တော် ဗဟုသုတ တိုးလေပဲ။ နောက် အပတ် ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာ။
စကားဝိုင်း ဤတွင် ပြီးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ရဲ့ စာဖတ်သူများ ကျွန်တော့်အတွက် ကိုးကားစရာနှင့် ကိုမင်းညို၏ ပြောစကားအပေါ် သုံးသပ်မှုများအား မျှော်လင့်ပါသည်။
(နောင်လာနောက်သားဖေ့ဘုတ်သုံးပြီး ငြင်းခုံကြသူများ အကျိုးအကြောင်းနှင့် ငြင်းခုံနိုင်စေရန် ချောင်ချိုချောင်ကြားက ပို့စ်တစ်ခု မလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျန်အပိုင်းများ ဆက်တင်ပါအုံးမည်။)
ဦးစောက ဘာကွောငျ့ ဗိုလျခြုပျကို သတျတာလဲ ဆှေးနှေးခွငျး
ယနတေ့ော့ အငျမတနျ အံ့သွစရာကောငျးတဲ့ ဆှေးနှေးစကားဝိုငျး တဈခုကို ကွုံခဲ့ရသညျ။ စကားဝိုငျးတှငျ ပါကွ သူ မြားကတော့ ကြှနျတျော၊ စဈမှုထမျးဟောငျးကွီး ဦးတငျဝငျးနှငျ့ ကို မငျးညို တို့ဖွဈသညျ။ ဦးစော ဘာလို့ ဗိုလျခြုပျကို သတျသလဲ ခေါငျးစဉျကို ကို မငျးညိုက စသညျမို့ ကိုမငျးညိုအကွောငျး အနညျးတော့ ပွောပွ ပမေညျ။ အသကျ ၃၇ နှဈအရှယျ ကိုမငျးညိုနှငျ့ စတငျ တှဆေုံ့စဉျက သူသညျ စောဘှဲ့မှူး၏ မကျြလုံးတဈဖကျ ကနျးနခေဲ့ပါလြှကျ ဘုရငျကိုဖမျးပွီး အကဉျြးခဝြံ့သူ ငရမနျကနျးကွီးအား အရမျးဂုဏျပွုမိတော့ ဆိုသညျ့ သီခငျြး အတိုငျး ငရမနျကနျးကို သတ်တိရှိသူ အဖွဈ ခြီးမှမျးခဲ့သညျ။
ဦးပေါငျးကြားနှငျ့ မွငျးကြားရှငျ ဇာတျလမျးတှငျ ညကွီး သနျးကောငျ ဦးပေါငျးကြားနှငျ့ မွငျးကြားကွီးကို စီးသော အလောငျးစညျသူမငျးကွီး၏ ငါမအိုသေး ဇာတျလမျး အား ဘုရငျမို့လို့ မသိဟနျဆောငျ လှတျပေးလိုကျသညျ ဆိုသညျ့ ဆောငျးပါးကို သူအရမျးကွိုကျကွောငျး ပွောခဲ့သညျ။ ခဈြဦးညို၏ လင်ျကာဒီပခဈြသူ ဝတ်တုကွီးကို သူဘာကွောငျ့ ကွိုကျကွောငျးတှလေညျး ပွောတတျ သညျ။ ယခု တဈကွိမျတှငျတော့ သူကိုယျပိုငျ ဖနျတီးသညျ့ ဇာတျကောငျသညျ ဦးစော ဖွဈပတေော့သညျ။
စာမဖတျသူသညျ စကားဝိုငျးတှငျ ကြီးအ ကဲ့သို့ နှုတျဆိတျရသညျဆိုသညျ့ အဖွဈကို ကြှနျတျော ကွုံလိုကျ ရသညျ့ နအေ့ဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့သညျ။ ဗိုလျခြုပျနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ ဆောငျးပါး၊ အတုပတ်တိမြားစှာ ကြှနျတျော ဖတျဖူးသညျ။ ဗိုလျခြုပျ ဘယျလောကျတျောကွောငျး ခြီးမှမျးမညျ ဆိုရငျလဲ အာဘောငျအာရငျး သနျသနျ ဆှေးနှေးတတျသညျ။ သို့သျော ကိုမငျးညိုမှ ဦးစော ဘာကွောငျ့ ဗိုလျခြုပျကို သတျသလဲ ဆိုသညျ့ မေးခှနျးကို ဖွဖေို့တော့ ကြှနျတျော ခကျြခငျြး အဖွမေထှကျခဲ့။ Who really Killed Aung San ဆိုသညျ့ Documentary ကို ကွညျ့ဖို့ ပငျြးသညျ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျပငျ အပွဈဆိုရတော့ ပမေညျ။
စကားဝိုငျးကို စသူက ကြှနျတျော။ ဗိုလျခြုပျမှေးနမေို့ ဗိုလျခြုပျအကွောငျးကို အစဖျော၏။ ကိုမငျးညိုကား ပွုံးပွီး နားထောငျ၏။ ထို့နောကျတှငျမှ ကဲ..မောငျရငျ.. ဒါဖွငျ့ ဦးစော က ဘာဖွဈလို့ ဗိုလျခြုပျကို သတျရတာလဲ ဆိုတာ သိလား ဆိုသညျ့ အမေးကို စမေးလတေော့သညျ။
ကြှနျတျော။ မကနြေပျလို့ သတျတာပေါ့ ကိုမငျးညိုရာ။ ၁၉၄၆ စကျတငျဘာမှာ ဦးစော ကို သနေတျနဲ့ ပဈပွီး လုပျကွံလို့ မကျြလုံးတဈဖကျကှယျခဲ့တယျ။ ဒါကို ဗိုလျခြုပျ ခိုငျးတယျ ဆိုပွီး ဦးစော က ညှိုးတယျလေ။ ဒီအတှကျ ပွနျသတျတာ မဟုတျလား။
ဦးတငျဝငျး။ ဗိုလျခြုပျကို သတျဖို့ အင်ျဂလိပျက ထောကျပံ့တယျလေ။ အငျးယားကနျထဲမှာပါ သနေတျတှေ ဖှကျ ထားတာကို တှခေဲ့တာပဲ။ ဒါကိုကွညျ့ရငျ အင်ျဂလိပျနဲ့ပေါငျးပွီး ဦးစောက ဗိုလျခြုပျကို အညှိုးနဲ့ သတျတာလို့ မှနျးရ မှာပဲလကှော။
ကြှနျတျောတို့ နှဈယောကျရဲ့ အဖွကေို ကိုမငျးညို ဘဝငျကပြုံ မရ။ သူက စကားဆကျသညျ။
ကိုမငျးညို။ ကြှနျတျောလညျး အဲဒါတှေ စဉျးစားမိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဦးစောအကွောငျး လလေ့ာကွညျ့တော့ သူဟာ ပညာတတျ ပုဂ်ဂိုလျ တဈယောကျဗြ။ ကြောငျးပညာ ၅ တနျးအောငျဆိုပမေယျ့ ၁၉၂၇ မှာ အောကျတနျးရှနေ့ေ စာမေးပှဲ အောငျခဲ့တယျ။ GCBA မှာ ဝငျပွီး ဝံသာနု အသငျးဝငျ လုပျခဲ့တယျ။ နနျးရငျးဝနျလဲ လုပျခဲ့တယျ။ ဗိုလျခြုပျလကျထကျမှာ ပညာရေးဝနျကွီးဆိုတော့ သူဟာ သာမနျတော့ မဟုတျတနျဘူး။ သိပျပွီးတော့ ရူးမိုကျတဲ့ သူတဈယောကျတော့လညျး မဟုတျဘူး။ နောကျပွီး သူ့ကို ဖမျးတဲ့ အခြိနျမှာတောငျ ဝီစကီသောကျပွီး ဟာသပွောနိုငျသေးတယျ။ အငျမတနျမှ သှေးအေး တဲ့သူ။
ကြှနျတျော။ အဲဒါနဲ့ ဘာဆိုငျလဲဗြာ။
ကိုမငျးညို။ သူ့အကွောငျး ပွောမယျဆိုရငျ သူနဲ့ ပတျသကျတာတှကေို အရငျသိအောငျ လုပျရမှာပေါ့။ ဦးစော က တကယျ့မြိုးခဈြ တဈယောကျပဲ။ ဆရာစံ ကို ဖမျးမိတော့ ဆရာစံဘကျက ရှနေ့လေိုကျတာ ဦးစောပဲ။ အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ မွနျမာပွညျအရေးဆိုပွီး စာအုပျထုတျခဲ့ဖူးတယျ။ အင်ျဂလိပျကို ဝဖေနျလှနျးလို့ မောငျစော ဂဋုနျ ဖွဈပွီ ဆိုပွီး ဂဋုနျဦးစော ဖွဈလာတာ မဟုတျလား။ မွနျမာနိုငျငံကို ဒိုမနေီယံ အုပျခြုပျရေးပေးဖို့ အကျတလီနဲ့ တှပွေီ့း ပွောခဲ့သေးတယျ။ နောကျပွီး သူက အင်ျဂလိပျ အဖမျးခံရပွီး ပွနျလာတာတောငျမှ မွနျမာ နိုငျငံရဲ့ နိုငျငံရေးမှာ အရေးပါလာခဲ့သေးတယျလေ။
ကိုမငျးညို။ ကိုယျ စဉျးစား မိတာပါ။ စပွောရမယျဆိုရငျ အောငျဆနျး-အကျတလီ စာခြုပျက စပွောရမှာပဲ။ အဲဒီစာခြုပျကို လကျမှတျသှားထိုးတော့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့မှာ ဦးစောက ပညာရေးဝနျကွီး အနနေဲ့ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီ စာခြုပျမှာ ဦးစောနဲ့ သခငျဗစိနျက လကျမှတျ မထိုးခဲ့ဘူး။ ဒီအခကျြတှကေို ကွညျ့ရငျ ဦးစောဟာ ဗိုလျခြုပျတို့ လှတျလပျရေး ကွိုးပမျးစဉျ တဈလြှောကျမှာ အတူပါခဲ့တယျ။ မွနျမာနိုငျငံ လှတျလပျရေး ရဖို့ အတှကျ သူလညျး ကိုယျစှမျးဉာဏျစှမျး ပါဝငျခဲ့တယျလို့ ပွောလို့ ရတယျ မဟုတျလား။
ကြှနျတျောနှငျ့ ဦးတငျဝငျး နှဈယောကျမှာ ဇဝဇေဝါ ဖွငျ့ သူ ဘာကို ဆိုလိုခငျြမှနျး သိပျနားမလညျ။ တကယျတမျး ပွောရမညျ ဆိုလြှငျ အောငျဆနျး-အကျတလီစာခြုပျကို ငယျတုနျးက သမိုငျးမှာ သငျဖူးသညျကလှဲပွီး သခြော မသိ။ အောငျဆနျး-အကျတလီ စာခြုပျကွောငျ့ ပငျလုံ ကငျြးပရသညျ ဆိုတာကိုတော့ အကွမျးဖငျြးသိသညျ။ ဦးစောနှငျ့ ဘယျလို ဆကျစပျသညျကိုတော့ အသအေခြာ မသိသညျမို့ သူ့စကား အဆကျကိုသာ နားထောငျ ရတော့သညျ။
ကိုမငျးညို။ နောကျ တဈခကျြက ဦးစော ကလညျး နိုငျငံခွားပွနျ ပညာတတျတဈယောကျပဲ။ အဲဒီခတျေက ခေါငျး ဆောငျတှေ အားလုံးဟာ နိုငျငံရေး ယုံကွညျခကျြတှေ ပွငျးထနျကွတယျ။ အဲဒီထဲမှာ ဦးစောလဲ တဈယောကျ အပါအဝငျပေါ့။ သူတို့ စပွီး အဲဒီမှာ ကှဲကွပုံရတယျ။
ကြှနျတျော။ ဘယျလို ကှဲကွတာလဲဗြ.
ကိုမငျးညို။ ဗိုလျခြုပျက တဈနိုငျငံလုံး လှတျလပျရေး ရခငျြတယျ။ တောငျတနျးပွညျမ အားလုံး အတူရခငျြတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာတော့ ဦးစောက မဖွဈနိုငျဘူးလို့ တှေးခငျြလဲ တှေးမှာပေါ့။ ပငျလုံညီလာခံကွီး ကငျြးပတော့ ဗိုလျခြုပျက ကတိတှေ ပေးခဲ့တယျ။ ခှဲထှကျခှငျ့တှေ၊ ကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျခှငျ့တှေ အမြားကွီးပဲ။ ဒါတှကေို ဦးစော က ကနျ့လနျ့တိုကျတာတှတေော့ မကွားဖူးဘူး။ ဆိုလိုတာက ပငျလုံ ညီလာခံအပွီးမှာ တဈနိုငျငံလုံး လှတျလပျ ရေး ရတာကို ဦးစောလဲ ဗိုလျခြုပျတို့နဲ့ အတူ လကျခံသှားတာ ဖွဈနိုငျတယျ။
ဦးတငျဝငျး။ ကွိတျကွံနတောလဲ ဖွဈနိုငျတာပဲ။ ကြှနျတျောတို့မှ သူ့အကွောငျး မဖတျဖူးတာ။
ကိုမငျးညို။ ကိုတငျဝငျး ထငျတာလဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပငျလုံညီလာခံကွီးက သဘောတူတဲ့ အခကျြ တှေ က တဈခြို့ မွနျမာ ခေါငျးဆောငျတှေ လကျမခံနိုငျစရာတှေ အမြားကွီးပါတယျလေ။ ဖွဈစဉျတဈခုမှာ ဗိုလျ ခြုပျမပါတဲ့ အစညျးအဝေးတဈခု ကငျြးပတယျ။ အဲဒီမှာ ပငျလုံက သဘောတူညီခကျြတှေ ပွောတော့ ဗိုလျခြုပျ ပွောတာ၊ငါတို့နဲ့မဆိုငျဆိုပွီး ဆကျမဆှေးနှေးလို့ တိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျတှေ ဒေါသထှကျကွတယျ။ နောကျမှ ဗိုလျခြုပျက ချေါပွီး ပွနျရှငျးရတယျ။ အဲဒီမှာတငျ ဗိုလျခြုပျပေးတဲ့ ကတိတှနေဲ့ တဈခွားသူတှကွေားမှာ အမွငျမကွညျတာ တှေ ရှိလာပွီ မဟုတျလား။
သူပွောပုံအရဆိုရငျ ဗိုလျခြုပျတဈယောကျထဲပဲ ပငျလုံနဲ့ ပတျသကျတာတှေ ပွောခဲ့သယောငျယောငျမို့ အခကျြ အလကျတှကေို ခေါငျးပူအောငျ စဉျးစားပမေယျ့ ခကျြခငျြး မထှကျတာမို့ အလိုကျသငျ့သာ သူ့ကို ဆကျပွော စခေဲ့သညျ။
ကိုမငျးညို။ ပငျလုံညီလာခံလဲ ပွီးပွီ။ ဗမာပွညျလဲ လှတျလပျရေး ရတော့မယျ။ ဗိုလျခြုပျပေးတဲ့ ကတိတှေ ကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားတှကေလဲ အဲဒီအခြိနျမှာ ပွငျဆငျနပွေီ။
ဦးတငျဝငျး။ ဘာကို ပွငျဆငျတာလဲ။ ရှငျးရှငျးပွောပါဗြာ။
ကိုမငျးညို။ လာမှာပေါ့ ကိုတငျးဝငျးရာ။ တိုငျးရငျးသားတှေ လိုခငျြတာက ခှဲထှကျခှငျ့လေ။ စျောဘှားတှေ၊ ပဒသေရာဇျတှေ မဟုတျလား။ လှတျလပျရေး ရဖို့ ကတိတှေ ရပွီးပွီ ဆိုတဲ့နောကျ ကိုယျ့အာဏာ ကိုယျတညျ ဆောကျဖို့ ပွငျကွပွီပေါ့ဗြာ။
အခုထိတော့ ကြှနျတျောလညျး သဘောမပေါကျသေး။ ကိုမငျးညို ဘာကို ပွောခငျြသညျ့အတှကျ ဒီလောကျ စကား ရှညျနလေဲ ဆိုတာလဲတှေး မရသေး။
ကြှနျတျော။ ကဲ..ကိုမငျးညို. ဒဲ့သာပွောဗြာ။ ခငျဗြားစကား နားထောငျရတာလဲ တကယျ့အခကျပဲ။
ကိုမငျးညို။ ကြှနျတျော ပွောခငျြတဲ့ အခကျြရောကျပါပွီ။ လှတျလပျရေး ရရငျ ပဒသေရာဇျတှေ စျောဘှားတှကေ ခှဲထှကျခှငျ့တောငျးမယျ၊ ဗိုလျခြုပျကလဲ ကတိခံထားတာမို့ ပေးကို ပေးရမယျ။ မပေးဘူး ဆိုရငျ အင်ျဂလိပျ လကျ ကနျြနဲ့ လှတျလပျပွီးစမှာ စဈခငျးရတာတှေ၊ စညျးရုံးရတာတှနေဲ့ တိုငျးပွညျ တညျဆောကျနိုငျမှာ မဟုတျတော့ ဘူး။ ဒီတော့ လုပျစရာက တဈခုပဲ ရှိတော့တယျ။
ကိုမငျးညို။ကြှနျတျောတို့ ဆှေးနှေးတဲ့ ခေါငျးစဉျ ပေါ့ဗြာ.
ကိုတငျဝငျး။ ဟာဗြာ.. မဖွဈနိုငျတာ။
ကြှနျတျော။ ကိုမငျးညို ပွောပုံအရ ဆိုရငျ ပွညျထောငျစုကွီး ခှဲထှကျမှာ စိုးလို့ ဦးစော ကပဲ ဗိုလျခြုပျ တို့ကို အနဈ နာခံပွီး သတျပေးလိုကျသလို ဖွဈနပွေီ။ မတနျမရာဗြာ။
ကိုမငျးညို။ ဒါလဲ ခငျဗြားတို့ အတှေးနဲ့ ခငျဗြားတို့လဗြော။ ကြှနျတျော သိတာက ဦးစော ဟာ ပညာတတျ။ တှေး တတျ စဉျးစားတတျတယျ။ အမြိုးသား ခေါငျးဆောငျတှကေို လုပျကွံပွီး သူလှယျလှယျ လှတျခငျြရငျ လယောဉျ နဲ့ နိုငျငံကူးမှာပေါ့ဗြာ။ နောကျပွီး သူ့အမြိုးတှေ အကုနျ အပွငျကို လှတျမှာပေါ့။ ဒီထကျပိုပွီး ကွံစညျခငျြတယျ ဆိုရငျ ပိပိရိရိ ကွံလို့တောငျ ရသေးတယျ။ ဘုရငျခတျေတုနျးကတောငျ အိမျရှစေံ့ကနောငျမငျးသားကိုသတျပွီး မွငျကှနျး၊မွငျးခုံတိုငျတို့ထှကျပွေးတာ လှတျသေးတာပဲ။ အင်ျဂလိပျခတျေ မလှတျစရာကို မရှိတာ မဟုတျလားဗြ။
ဗိုလျခြုပျ တို့ အသတျခံရခြိနျတှငျ ပွညျသူမြားက ဦးစောအိမျကို ခဲနဲ့ပေါကျ၊ စာတှေ ကပျ၊ ဆဲဆိုကွသညျမှာ လညျး ထိနျးမရခဲ့။ ဦးစော မိသားစု မြားသညျလညျး မွနျမာနိုငျငံတှငျ ရပျတညျ မရခဲ့။ ထိုသို့သော ဝဒေနာ မြား ကို ဖွဈလာမညျကို သိပါလြှကျ ဦးစော ဘာကွောငျ့ ကကြေနြေပျနပျ ကွိုးစငျတကျသှားသညျ ဆိုသညျ့ အတှေး ကို ကြှနျတျော တှေးမိလိုကျသညျ။ သခြောသညျကား ကြှနျတျော ကိုမငျးညိုကို တုနျ့ပွနျပွောနိုငျဖို့ စာဖတျ ရအုံး ပမေညျ။
ကြှနျတျော။ ကဲ..ဟုတျပါပွီဗြာ။။ ဒီနတေ့ော့ ဒီလောကျပဲ။ နောကျအပတျ တှမေ့ယျဗြာ။ ကြှနျတျော နညျးနညျး လလေ့ာ လိုကျအုံးမယျ။ လုံးဝတော့ လကျမခံနိုငျသေးဘူးဗြို့။
ကိုမငျးညို။ ကောငျးပါပွီကှာ။ လလေ့ာ ပေါ့။ ခငျဗြားတို့ စာဖတျလေ ကြှနျတျော ဗဟုသုတ တိုးလပေဲ။ နောကျ အပတျ ဆှေးနှေးကွတာပေါ့ဗြာ။
စကားဝိုငျး ဤတှငျ ပွီးခဲ့သညျ။ ကြှနျတျောရဲ့ စာဖတျသူမြား ကြှနျတေျာ့အတှကျ ကိုးကားစရာနှငျ့ ကိုမငျးညို၏ ပွောစကားအပျေါ သုံးသပျမှုမြားအား မြှျောလငျ့ပါသညျ။
(နောငျလာနောကျသားဖဘေု့တျသုံးပွီး ငွငျးခုံကွသူမြား အကြိုးအကွောငျးနှငျ့ ငွငျးခုံနိုငျစရေနျ ခြောငျခြိုခြောငျကွားက ပို့ဈတဈခု မလာခွငျးဖွဈသညျ။ ကနျြအပိုငျးမြား ဆကျတငျပါအုံးမညျ။)
တိုက်​ခိုက်​သူကို ရင်​ဆိုင်​နည်း – ဆရာတော် အရှင်​သုစိတ္တ (​မော်​ကျွန်း)
နှစ်(၁၀၄) အထိအသက်ရှည်နေရခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်ကဘီယာသောက်လို့မို့ နေ့စဉ် သောက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဖွားဖွား
မုဒြာေ ခါ် သံ နောက် ကွယ် က အမှန် တ ကယ် ဆုံး ရှုံး ခဲ့တဲ့မိသား စုဝင်ေ လးအကြာင်း ရင် နင့် ဖွ ယ်ပြောပြ လာ တဲ့ သူ မ”
ဂျပန်တွင် H1N1ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေ၍ ဂျပန်သွားမည့် မြန်မာများအတွက် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်